Maaamulka Al-shabaab ee degmada Balcad oo xiray in ka badan 200 oo haween ah. [Akhris …] – Radio Daljir
Luulyo 28, 2009 12:00 b 0
Balcad, July 28 – Maamulka islaamiga ah ee Al-shabaab ee gacanta ku haya degmada Balcad ee gobolka Sh. Dhexe ayaa xabsiga u taxaabay in ka badan 200 oo haween ah oo ku noolaa degmada Balcad.
Haweenka la xiray oo isugu jiray gabdho, kuwo xaasas ah iyo hooyooyin da’a ah ayaa lagu soo eedeeyey in ay ka dhaga-adaygeen amar maamulka degmadaasi dhawaan u soo jeediyey oo ku aaddanaa in ay jirkooda asturaan, isla markaana ay xirtaa xijaab suurtogalin kara in aan la arag jirkooda xilliya ay marayaan suuqyada ama goobahooda ganacsiga.
Mas’uul u hadlay maamulka degmada Balcad ee gobolka Sh/dhexe oo ay la xiriirtay idaacadda Daljir ayaa sheegay haweenka la xir-xiray in ay dhagaha ka furaysteen talooyin wax ku ool ah oo sida uu sheegay maamulkiisu u soo jeediyey haweenkaasi kaasi oo muujinayey in ay xirtaan xijaabo iskana daayaan dharka kale oo uu ku tilmaamay in uu meel ka dhac ku yahay dhaqanka suubban iyo diinta islaamkaba.
Dhanka kale qaar ka mid ah odayaasha deegaanka Balcad ee maanta la xir-xiray xaasaskooda ayaa idaacadda Daljir u sheegay in ay aad uga xun-yihiin tallaabada xabsiga loogu taxaabay xaasaskooda, waxayna sheegeen in ay la socdeen amarkii maamulku soo jeediyey ee ahaa haweenku in ay xijaabtaan, laakiin ragga badankiisu uusan awoodin iibinta dharkaasi lagu amaray taasina ay tahay sababta looga baaqsaday.
Odayaasha Daljir la xiriirtay oo qaar ka mid ah xaasaskoodii la xiray ayaa sheegay sababta xariggu in aysan ahayd xirasho xijaab, oo haweenka la xir-xiray qaarkood ay siteen xijaabo laakiin arrintu ay tahay dhar gaar ah iyo labis gaar ah oo la rabo haweenku in ay xirtaan, kaasi oo uu ku sheegay in uu yahay xijaabo qaali ah oo dadka badankiisu uusan awoodin in uu iibsado.
Qaar ka mid ah haweenkaasi laa la tilmaamayaa hadda in laga siidaayey saldhiggii lagu soo aruuriyey, waxaan wararku ay intaasi ku darayaa ku dhawaad 150 haween ah hadda in ay wali ku jiraan goobihii lagu xareeyey oo aan lahayn adeeg saacidi kara nolosha qodka maxbuuska ah.
Waa markii ugu horreysay oo uu ururka Al-shabaab uu xir-xiro haween intaasi le’eg oo lagu eedaynayo in ay diideen amarro loo soo jeediyey, waxaana haatan dadka reer Balcad ay dhegta u taagayaan tallaabada middaan xigi doonta.
Golaha Ammanka ee QM oo maanta kulan ka yeelanaya xaaladda murugsan ee Soomaaaliya. [Akhris …]
5 mudane oo ka tirsan baarlamaanka Somaliya oo xilkii xildhibaanimo laga xayuubiyey, halka 14 kalena loo digay. [Dhegaysi …]